Fampandrosoana : hajoro ny filankevitry ny governora | NewsMada
Fampandrosoana : hajoro ny filankevitry ny governora
Taon’ny asa ity 2020 ity. Hajoro ny filankevitry ny governora, ary tokony ho azo tsapain-tanana sy misy fiantraikany mivantana any amin’ny vahoaka malagasy ny fampandrosoana, araka ny nambaran’ny filoha Rajoelina Andry.
“Tsy maintsy mandroso isika, ary tsy maintsy tafita ny faritra tantanin’ny governora. Tonga ny fotoana tsy maintsy hofenoina ny governoran’ny faritra manerana an’i Madagasikara. Raha vao feno izay, hapetraka ny filankevitry ny governora.”
Io ny nambaran’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, teny amin’ny lapan’Ambohitsorohitra, omaly, tamin’ny fiarahaban’ireo governoran’ny faritra sy ny avy amin’ny Ceni ary ny avy amin’ny Akademia malagasy azy noho ny fahatongavan’ny taona vaovao 2020. Nisy ihany koa ny lehibena antoko vitsivitsy.
Toy ny filankevitry ny minisitra ihany izay filankevitry ny governora izay, fa iarahana amin’ny filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra. Hojerena amin’izany izay tokony hatao any anivon’ny faritra tsirairay avy amin’ny fampandrosoana sy ny olana momba ny fandriampahalemana, ny fahavitan-tena ara-tsakafo, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny famoronana asa…
Misy tanjona ny fametrahana governora
“Vonona ny tenako manokana. Matoa aho nanova ny anarana hoe governoran’ny faritra fa tsy lehiben’ny faritra fotsiny”, hoy izy. Firenena maro no manana governora. Manana izany ny any Sina, ny any Etazonia… Matoa napetraka ny governoran’ny faritra eto Madagasikara, misy tanjona lehibe tiana hotratrarina amin’ny fampandrosoana ny faritra iadidian’izay governora izay.
Araka ny velirano nataony, indrindra ny hoe hampandrosoana an’i Madagasikara: mipaka bebe kokoa amin’ny fampandrosoana any anivon’ny distrika tantanin’ireo eo anivon’ny faritra ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Tsy maintsy mipaka any amin’ny vahoaka izany.
Tsy tokony hisy intsony ny distrika hadino eto Madagasikara. Tsy maintsy apetraka ny tantara, hampandroso ny zavatra tsy vita tany amin’ireny faritra sy distrika maromaro ireny. Hatao amin’izao fotoana izao izany, araka ny nambarany.
Hohafainganina kokoa ny fampandrosoana
Hahazoana mampandroso kokoa ny hafainganam-pandeha amin’ny fampandrosoana ity taona ity, hanatanterahana amin’izay ireo asa rehetra. Tokony ho azo tsapain-tanana sy misy fiantraikany mivantana any amin’ny vahoaka malagasy izany.
Maro ny asa efa natao, nefa mbola maro koa ny tokony hatao. Anisan’izany ny momba ny sekoly. Raha teo amin’ny 800 ny efitrano fianarana tamin’ny taon-dasa, tokony hiakatra isan-taona ny isan’izany. Tsy vitan’ny minisitera irery izany, fa ireo governora no anisan’ny andry ianteherana hitondra izay fotodrafitrasa maro izay.
Anisan’izany fotodrafitrasa izany koa ny hopitaly, ny kianja ho an’ny tanora, ny fanatsarana ny fampianarana… Sambany eto Madagasikara ny oniversite mahakasika ny faritra. Nandritra ny 20 na 30 taona, tsy nisy tetikasa hanaovana oniversite vaovao. Izao vao misy izany, anisan’izany ny any Vakinankaratra, Itasy, Morondava… Efatra no natomboka tamin’ny taon-dasa, efatra na enina amin’ity taona ity. Mandra-pahatapitry ny fe-potoam-piasana, tsy maintsy hahazo oniversite avokoa ny faritra rehetra manerana an’i Madagasikara.